Ny lohahevi-dehiben'ny Soratra Masina
"Kanefa raha izaho, dia fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy, ka hitsangana any am-parany eo ambonin'ny vovoka lzy." - Joba 19:25.
Ny anankiray amin'ny hafatra miezinezina sy be voninahitra indrindra ambara ao amin'ny Baiboly dia ilay momba ny fiverenan'i Kristy fanindroany mba hameno ny asa lehiben'ny fanavotana. Ho an'ny zanak'Andriamanitra izay navela hitoetra ela tokoa teto amin'ity «lohasaha aloky ny fahafatesana» ity, dia misy fanantenana sarobidy miteraka fifaliana entin'ny teny fikasana momba ny fisehoan'llay «fananganana ny maty sy fiainana», izay hampody ilay noroahiny. Ny foto-pinoana momba ny fiverenan'i Jesôsy fanindroany no fanalahidin'ny hevitry ny Soratra Masina rehetra. Hatramin'ny andro izay nandiavan'ireo mpivady voalohany ilay lalam-pahoriana niala an'i Edena, dia efa niandry ny fiavian'llay Nampanantenaina hanamontsana ny herin'ny mpandringana sy hamerina azy ireo indray ho amin'ilay Paradisa efa very ireo zanaky ny finoana. Nobanjinin'ny olona masina fahiny ny fiavian'ny Mesia amim-boninahitra, izay fanatanterahana ny fanantenany. I Enoka, izay vao taranaka fahafito monja avy tamin'ireo nonina tao Edena, sy niara-nandeha telonjato taona tamin'Andriamanitra tety an-tany, dia navela hitazana ny fiavian'llay Mpanafaka. «lndro, hoy izy, tonga Jehovah mbamin'ny masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra» Joda 14:15. Raha tao anatin'ny alim-pahoriana nahazo azy i Joba patriarka dia niteny tamin-toky tsy azo nohozongozonina hoe: «Fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy, ka hitsangana any am-parany eo amboninlny vovoka lzy sady afaka amin'ny nofoko aho, dia hahita an'Andriamanitra; eny, izaho no hahita Azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa» Jôba 19:25-27. - HM, t. 313.
Andriamanitry ny fahasoavana rehetra anie hanazava tanteraka ny sainareo mba hahafahanareo mamantatra ny momba ny mandrakizay, ka amin'ny alalan'ny fahazavan'ny fahamarinana no hahafahanareo mahalala ny fahadisoanareo, izay betsaka tokoa, araka ny tena endriny, mba hahafahanareo manao ny ezaka ilaina hanalavirana azy ireo, ka eo amin'ny toeran'ny ratsy, ny voankazo mangidy dia afaka ny ho tonga voankazo sarobidy ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Ampilefero eo amin'Andriamanitra ny fonareo mahantra, mpirehareha sy mpanamarin-tena; mietre, ambany dia ambany eo an-tongony amin'ny toetrareo rotidrotiky ny fahotana. Atokany ho an'ny asa fiomanana ny tenanareo. Aza mitsahatra mandra-pahatonga anareo ho afaka hilaza hoe: velona ny Mpamonjiko, ary satria velona lzy dia ho velona koa aho.
Raha verinareo ny lanitra dia verinareo ny zava-drehetra; raha mahazo ny lanitra ianareo dia mahazo ny zava-drehetra. Miangavy anareo aho, aza mamita-tena. lankinan'ny mandrakizay izany. – TFC, 2:88.